Xudaydi Macalinkii Heesaha Cuudka oo u dhintay Coronavirus | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Xudaydi Macalinkii Heesaha Cuudka oo u dhintay Coronavirus
Waxaa dalka Britain ku geeriyooday fannaanka weyn ee Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo uu ku dhacay cudurka Corona Virus,isaga oo maalmihii la soo dhaafay ku jiray cisbitaal ku yaalla magaalada London.
Xudeydi ayaa da’diisu waxaa lagu sheegay 92 jir,isaga oo sanadihii ugu dambeeyey ku noolaa Magaalada london ee wadanka Ingiriiska.
Xudaydi waxa uu dhashay, Sanadkii 1928-kii, waxaana uu jirey 92 sano, isagoo ku dhawaad qarnigaa ahaa tiir aan liicin oo uu leeyahay fanka Soomaalidu, iyada oo lagu yaqaannay tumidda muuusigga, gaar ahaan cuudka.
Waxa uu ku dhashay magaalada Berbera, waxaana uu dhallinyaronimadiisii ku soo qaatay Cadan, ka hor intii uusan soo noqon. Waxa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa aasaasayaasha fanka casriga ee Soomaalida.
Previous articleCiidamo Horleh Oo Ku Sii Qul Qulaayo Wanla-weyn.
Next articleWaa sidee xaalada Caafimaad ee Ra’iisul Wasaaraha Britain?